Banijya News | » नेपालमा भित्रियो सलह किरा, नियन्त्रणको लागि के गर्दैछ सरकार ? नेपालमा भित्रियो सलह किरा, नियन्त्रणको लागि के गर्दैछ सरकार ? – Banijya News
नेपालमा भित्रियो सलह किरा, नियन्त्रणको लागि के गर्दैछ सरकार ?
नेपालमा वनस्पति नाशक कीरा ‘सलह’ प्रवेश गरेको पुष्टि भएसँगै सरकारले रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई अगाडि बढाएको छ । आजमात्र बारा, सर्लाही, पर्सा, सिन्धुली र रुपन्देहमा सलह कीरा देखा परेको शनिबार पुष्टि भएको थियो ।
हावाको वहाव उत्तरतर्फ बहन थालेपछि भारतको बिहार हुँदै सहल किरा नेपाल प्रवेश गरेको छ । प्रदेश २ को बारा, पर्सा र सर्लाहीमा स्थानीय किसानले आज बिहान सलह किरा देखेका हु्न् । नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरुकाअनुसार, केही दिनअघि भारतको बनारस हुँदै गोरखपुरमा सलह देखिएको थियो । त्यसपछि सर्लाही, बारामा देखिएको हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कीट वैज्ञानिक सुनिल अर्यालले दक्षिणबाट उत्तरतिर हावा बहँदा सलह नेपाल प्रवेश गरेको बताए । मनुसुनको बेला सामान्यतया हावा पूर्वबाट पश्चिमतिर बहने भएपनि दुई दिनयतथा दक्षिणबाट उत्तर तर्फ बहेकेको उनीहरुको भनाई छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सलह किराको व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको टास्क फोर्सका संयोजक सहदेव हुमागाईंले फिल्डमै गएर प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा देखिएको सलह किराको पहिचान गर्ने काम सुरु भएको बताए । हुमागाईंका अनुसार प्राविधिक टोलीहरुले पठाएको तस्बिरका आधारमा नेपालमा देखिएका सलह वयस्क नभएको र अपरिपक्व वयस्क गुलाबी रंगका लोकस्टहरुमात्र देखिएका छन् ।
गुलाबी रंगका ती सलह मरुभूमिमा पाइनेजस्तो धेरै खन्चुवा नभएकाले तत्काल आत्तिहाल्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । नेपालमा मरुभूमिको जस्तो जमिन नभएको र पानी समेत परिरहेकाले ती किरा लामो समयसम्म नेपालमा नबस्ने कृषि मन्त्रालयको बुझाई छ । टास्क फोर्सका संयोजक हुमागाईंले धान रोप्ने समय भएको र अधिकांश जमिन खाली भएकाले क्षति कम हुने अनुमान गरेको बताए ।
कीट विज्ञान महाशाखाका कीट वैज्ञानिक एवं प्रवक्ता सुदीप उपाध्यायले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा झुन्डबाट छुट्टिएर आएका सलह जस्तो देखिएको बताउनुभयो । प्रजजनका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण नभएको कृषि वैज्ञानिकहरुको बिश्लेषण छ ।
सलह नेपालमा प्रवेश गरेको जानकारी आउने साथ काठमाडौंमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने छलफल थालेको छ । नेपालमा देखिएको किराको प्रजाती पत्ता लगाउन देखि कार्ययोजना तथा रोकथामका विधिबारे छलफल थालेको छ ।
मन्त्रालयको आकस्मिक बैठकले संघमा रहेको प्राविधिक कार्यदल र सम्बन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाएको छ । प्रदेश ५ सरकारले सलह कीरा समातेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनेले १ किलोको २० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । झुन्डमा रहने सलहले बाली र रुखबिरुवा नष्ट गर्ने सलह नष्ट गर्दछ ।